စက်ဘီးခမောက်ရှိ MIPS ကားအဘယ်နည်း။ - စက်ဘီးစီး
အဓိက > စက်ဘီးစီး > Mips ဆိုင်ကယ်ထုပ် - သင်မည်သို့ဆုံးဖြတ်မည်နည်း
Mips ဆိုင်ကယ်ထုပ် - သင်မည်သို့ဆုံးဖြတ်မည်နည်း
စက်ဘီးခမောက်ရှိ MIPS ကားအဘယ်နည်း။
MIPSMulti-directional Impact Protection System ကိုကိုယ်စားပြုသည်သံခမောက်အချို့သောသက်ရောက်မှုများမှဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်လှည့်အားကိုလျှော့ချရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
(ပြင်းထန်သောဂီတ) - ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းသည် ဦး ခေါင်းခွံအရိုးတွင် ဦး နှောက်တစ်သျှူးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်များသောအားဖြင့်သင့်ဒဏ်ရာရသည်ကိုမပြောပါ။ - လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသံခမောက်အသစ်တစ်ခုကိုသင်ဝယ်ယူခဲ့သည်ဟုစဉ်းစားမိပါက MIPS ဟုခေါ်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ MIMPS သည်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဲဒီအချိန်ကစပြီးသူတို့ရဲ့ပစ္စည်း ၉ သန်းကျော်ကိုရောင်းချခဲ့တယ်။ သို့သော် MIPS ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာလဲ။ ဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးခဲ့သလဲ ငါအတိအကျရှာဖွေရန်, ဒီနေရာမှာဆွီဒင်နိုင်ငံကိုဖိတ်ကြားခံခဲ့ရတယ်။ (ပျော့ပျောင်းသောအီလက်ထရောနစ်ဂီတ) စက်ဘီးစီးသူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးသည်သို့မဟုတ်အနာဂတ်တွင်မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းဟုခေါ်တွင်တစ်ခုခုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။ ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်း၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုမြင်နိုင်သည်။ သို့သော်ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းသည်အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။ ဦး နှောက်ထဲမှာဘာနဲ့တူလဲ။ ထွက်ရှာတွေ့ဖို့ငါတို့ Hans ကိုပြောခဲ့တယ်။
ဦး နှောက်တစ်သျှူးများ ဦး နှောက်တစ်သျှူးများထိတ်လန့်ရန်အတွက်ယေဘုယျစကားလုံးဖြစ်သော neurosurgeer နှင့် MIPS.- Concussion ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူတစ် ဦး၊ သို့သော်ပြင်းထန်သောပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်း၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်နူးညံ့သိမ်မွေ့ကြောင်းသင်သတိပြုရန်လိုအပ်သည်။
၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကအလယ်အလတ်ရှိပြီးကျန်တဲ့အရာတွေကတော့ခေါင်းကိုပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရစေပါတယ်။ ဤအမျိုးအစားအားလုံးသည်သင်၏သက်တူရွယ်တူများထံမှတုန့်ပြန်မှုရသည့်ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းသည် ဦး ခေါင်းခွံအရိုးရှိသင့် ဦး နှောက်တစ်သျှူးကိုတုန်ခါစေနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်ကိစ္စတော်တော်များများမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်တာဘယ်တော့မှမပြောပါဘူး။ အကယ်၍ သင်သည်ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းမှခေါင်းအနည်းငယ်ထိခိုက်ပြီးသင် CT သို့မဟုတ် MRI scan လုပ်နေလျှင်သင်ဘာမှမမြင်နိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင့်တွင်အလယ်အလတ်နှင့်ပြင်းထန်သောခေါင်းဒဏ်ရာရှိပါကပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းဖြစ်ပါကသင်အများတွေ့လိမ့်မည်။
သို့သော်ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်း၏အများစုမှာသင် သတ်မှတ်၍ မရသောခေါင်းကိုအနည်းငယ်ထိခိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကငါကကြည့်ရှုမယ်လို့ပုံပါပဲ။ (အကောင်းမြင်ဂီတ) - ယခုတွင် MIPS ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူ Peter Halldin မှကျွန်ုပ်နှင့်ပူးပေါင်းသည်။
ဘယ်သူ့ကိုငါဒီနေ့အနည်းငယ်ခက်ခဲမေးခွန်းများမေးလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ် y ။ ပြီးတော့ကျွန်တော်မသိသေးတဲ့အဖြေအနည်းငယ်ရှာပါ။ ဒီတော့ပေတရု, ငါ့ကို MIPS ၏အစအကြောင်းပြောပါ? ပထမ ဦး ဆုံးနေ့ကဘာလဲဒါကဘယ်လိုပုံလဲ။ ဦး နှောက်ခွဲစိတ်ဆရာဝန် Hans Van Holst ကိုစတွေ့တုန်းကသူကငါကပါရဂူဘွဲ့ယူချင်သလားလို့သူမေးတယ်၊ ငါအဲဒီလိုလုပ်ချင်တာသေချာမသိဘူး၊ ကြိုးစားမယ်
ပြီးတော့ခန္ဓာဗေဒ၊ လူ့ ဦး ခေါင်း၊ ဦး နှောက်အကြောင်းစဖတ်တယ်။ Hans သည်ထိုအရာကိုသိချင်သော်လည်းကျွန်ုပ်မသိပါ။ ဒါနဲ့ကျွန်တော် Hans ကိုပြောတယ်၊ ဒါဆိုငါတို့ ဦး နှောက်ထဲမှာရှိတဲ့ ဦး ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးစနစ်ကိုသုံးနိုင်တယ်။ 'ဦး နှောက်ဘယ်မှာလဲ။ ဦး ခေါင်းခွံသို့လျှောနိုင်ပါတယ်။ '' ဦး နှောက်သွေးကြောဆိုင်ရာအရည်အတွက်။ '' ဒီတော့ Hans က 'ကောင်းပြီ၊ ငါအရမ်းကောင်းတယ်ထင်တယ်' လို့ပြောတယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲဒီအတွေးအခေါ်ကိုစလုပ်ပြီးစကရင်ကိုသံခမောက်လုံးနဲ့ထည့်လို့ရမလားစူးစမ်းရှာဖွေကြတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သံခမောက်များကိုမည်သို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည်၊ သို့မဟုတ်စက်ဘီးသို့မဟုတ်ဆိုင်ကယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ကျသည်။ သံခမောက်များကိုသာစင်ကြယ်သောဒေါင်လိုက်ရေတံခွန်များအတွက်သာစမ်းသပ်သည်။ linear အရှိန်ကိုသာတိုင်းတာသည်။
ပြီးတော့ငါတို့ချက်ချင်းနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့တယ်၊ မင်းတို့ ဦး နှောက်ထဲကိုမဟုတ်ရင်ပို့လွှတ်တဲ့လှည့်စွမ်းအားတွေကိုလျှော့ချနိုင်တဲ့ဒီစိတ်ကူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးကျယ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ဟာလည်ပတ်မှုကိုပိုပြီးအထိခိုက်မခံတဲ့အတွက် ပြီးတော့သင်ကထောင့်တစ်နေရာမှာလဲကျတဲ့အခါအဲဒီလည်ပတ်မှုကိုရလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ပဟေpiecesိတစ်ခုထဲကိုအပိုင်းအစတွေစုပုံတဲ့နည်းပဲ။ အကြောင်းကိုပြောသည်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူ။ ပြီးတော့ဒါကကြီးမားတဲ့အကြံအစည်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ပြီးကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုလုပ်နိုင်တယ်။
ဒဏ်ရာများကိုလျှော့ချပါ။ သငျသညျယနေ့လည်ပတ်လှုပ်ရှားမှုဟုခေါ်တွင်တစ်ခုခုဖော်ပြခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ဒီစကားစုကိုတစ်ခါမှမကြားဖူးဘူး
အလှည့်ရွေ့လျားမှုအတိအကျကဘာလဲ? ထို့အပြင်သင်တီထွင်ထားသောဒီဇိုင်းနှင့်၎င်းမှဖြစ်ပေါ်စေသောဒဏ်ရာများကိုလျှော့ချရန်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကိရိယာသည်အဘယ်နည်း။ - ဥပမာသင်လက်ဝှေ့သမားကိုသင်ခေါ်ယူနိုင်သည့်လည်ပတ်မှုကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်စဉ်းစားသည်။ ခြေထောက်ပေါ်ဖြောင့်တဲ့လေဖြတ်ခြင်းကနေသင်ကိုယ်တိုင်ရင်ခွင်ကိုရိုက်ပုတ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ရုတ်တရက်သူတို့ထိပ်တန်းဖြတ်ရတော့မယ်၊ သူတို့ကအလှည့်ရတယ်။
ပြီးတော့သူတို့ထွက်ခေါက်နေကြသည်။ ဒီတော့လူ့ ဦး ခေါင်းနှင့် ဦး နှောက်သည်ရွေ့လျားမှုကိုပိုမိုထိခိုက်လွယ်သော၊ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု၊ ထောင့်တစ်ခုမှမြေပြင်ထက်စာလျှင်၊ သံခမောက်သည်မြေသို့တူးသည်၊ သင်ဤသံခမောက်၏လည်ပတ်မှုကိုခံရသည်။ တပ်ဖွဲ့များအလွန်မြင့်မားသောကြောင့်သံခမောက်သည်ဤအလှည့်ကို ဦး ခေါင်းသို့လွှဲပြောင်းပေးသည်။
MIPS ခမောက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သည်မှာ ၁၀ မှ ၁၅ မီလီမီတာအကွာအဝေးအားလုံးသို့ရွေ့လျားနိုင်သောလျှောအလွှာရှိသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဟာတကယ်တော့သင်ဟာရေခဲပေါ်ကျနေတယ်ဆိုတာကိုတုပနေတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ရေခဲပေါ်ကျလျှင် ဦး ခေါင်းသည်သူသွားလိုသည့်အလှည့်သို့ဆက်သွားပါလိမ့်မည်။
ငါတို့ဒီလျှောအလွှာထဲမှာရှိသည်။ ဒါကြောင့်ဒီအလွှာနဲ့သံခမောက်အကြားပွတ်တိုက်အားကိန်းနိမ့်ကျတယ်။ ပြီးတော့စွမ်းအင်ကိုလည်ပတ်မှုမှဘာသာပြန်သို့ပြန်သွားသည်။
citi ဆိုင်ကယ် Philly
ဒါကြောင့် ဦး နှောက်နဲ့ ဦး နှောက်အပေါ်လှည့်လည်လှုပ်ရှားမှုကိုလျှော့ချပေးတယ်။ (နူးညံ့သောအီလက်ထရွန် ic ဂီတ) - သင်လက်ရှိအသုံးပြုနေသောဒီဇိုင်းကိုဘယ်လောက်ကြာကြာယူခဲ့ပါသလဲ။ တဖန်သင်သည်အစဉ်မပြတ်အနာဂတ်၌ဒီဇိုင်းများအသစ်အဘို့အဖွံ့ဖြိုးဆဲပါသလား ဒါမှမဟုတ်ဒီဒီဇိုင်းကထာဝရအလုပ်လုပ်နိုင်မလား။ - ကျွန်ုပ်တို့သည်စနစ်အသစ်များကိုအမြဲတမ်းဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သည်။ ဦး ခေါင်းဒဏ်ရာရနေတုန်းပဲ။
ဥပမာ၊ ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းသည်ဒဏ်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်တွင်ပျက်စီးနေသောအရာကိုအတိအကျနားလည်ရန်သုတေသနများစွာပြုလုပ်ရန်ကျန်ရှိနေသေးသည်။ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာဤပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အခြားပြင်းထန်သော ဦး နှောက်ဒဏ်ရာများကြောင့် ဦး ခေါင်း၏လည်ပတ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါတို့တကယ်လုပ်နေတာကတော့ MIPS သံခမောက်လုံးနှင့်အမျိုးမျိုးသော MIPS ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူလုပ်သောတစ်ခုတည်းသောအရာသည်သင့်ကိုရိုက်နှက်ရန်ကျွန်ုပ်မည်သည့်အင်အားကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိသောအခါ ဦး နှောက်သို့လွှဲပြောင်းပေးသောလှည့်စွမ်းအင်ကိုလျှော့ချခြင်းဖြစ်သည် သင်ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းရရန်အဘို့အမဖြစ်မနေ။ သင့် ဦး နှောက်နှင့် ဦး နှောက်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ၎င်းမှာ MIPS သံခမောက် (အီလက်ထရောနစ်ဂီတ) နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည် - ကျွန်ုပ်သည်ဤအခန်းကိုစမ်းသပ်ခန်း၊ ရုံးခန်းသို့မဟုတ်ဘက်စုံသုံးကြံ့ခိုင်ရေးခန်း ဟူ၍ ခေါ်သင့်သလားဆိုတာမသေခြာပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့မှာ MIPS မှာသင်လေ့ကျင့်ဖို့သင်လိုအပ်သမျှတွေရှိတယ်။ နေ့လည်စာစားပါတယ် အလေးချိန်ခုံတန်းရှည်ရှိတယ်
မင်းမှာ stepper, rowing machine တစ်ခုရှိတယ်။ ပြီးတော့ချိန်ခွင်လျှာပြားများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်သည့်ဘောလုံးများရှိသည်။ ကြိုးအများကြီး။
ပြီးတော့အရေးအကြီးဆုံးအရာကတော့စက်ဘီးတွေပါ။ သူတို့မှာအဲဒီမှာအခန်းတစ်ခန်းရှိတယ်။ တောင်ကြီးတောင်ငယ်တွေလည်းရှိတယ်၊ စက်ဘီးတွေလည်းရှိတယ်။ MIPS မှာလေ့ကျင့်ပြီးတာနဲ့သင်တကယ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးအခန်းတစ်ခန်းရှိတယ်။ သွားပါ သွားစရာနေရာတစ်နေရာပဲရှိတယ်။ ဒီအနှိပ်ခန်းပါ။
၂ ကနေ ၄ လေးရှိတော့ဒါနဲ့လေးနာရီခန့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုအတွက်ငါစောလွန်းသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်အနှိပ်ရဖို့မစောင့်နိုင်တော့ဘူး (ပျော့ပျောင်းသောအီလက်ထရောနစ်ဂီတ) ကမ္ဘာပေါ်တွင် MIPS စမ်းသပ်မှုစင်တာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အောက်ထပ်သို့ဆင်းသွားပြီးထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအကြီးအကဲဖြစ်သောမားကတ်စ်ဖာ့တာ၊ ရုပ်သံလိုင်းစမ်းသပ်မှုပရိုတိုကောနှင့်သူအလုပ်လုပ်ပုံကိုအတိအကျပြသတော့မည်ဖြစ်သည်။ ပုံသဏ္andာန်နှင့်အရွယ်အစားအားဖြင့်သတ္တုတွင်းတစ်ခု uncanny အကြံအစည်သမုတ်သောတစ် ဦး ခေါင်းကိုအသုံးပြု။ ခံရဖို့သွား။ (အပျော့စားအီလက်ထရောနစ်ဂီတ) ဟုတ်ပြီ၊ ငါအခုစမ်းသပ်ခန်းမှာရောက်နေပြီ။
ထိုအခါငါထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ ဦး ခေါင်းဖြစ်သူပထမ ဦး ဆုံး Marcus ကပူးပေါင်းပါ။ Marcus ကို Marcus လို့ခေါ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက The Helmets ကိုဘယ်လိုစမ်းသပ်လဲဆိုတာ MIPS Test Log မှာဒီမှာ Marcus ငါးယောက်ထဲမှာတစ်ယောက်ပါ။ ပြီးတော့ငါတို့ကိုစမ်းသပ်မှုတွေပြတော့မယ်မဟုတ်လား။ - ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့စတော့ဟုမ်းရှိ MIPS ဌာနချုပ်မှာရှိတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ခွင့်ပြုချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကခမောက်များကိုစမ်းသပ်သည့်အခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော Halldin စစ်ဆေးမှုရပ်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ထုတ်ကုန်အသစ်တွေလည်းထုတ်လုပ်ဖို့သုံးပါတယ်။
ထိုအခါငါရုံသင်အနည်းငယ်စမ်းသပ်မှုပြသပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်ပတ်မှုအတွက်လျင်မြန်စွာစစ်ဆေးသည်။ ကျနော်တို့တစ် ဦး ထောင့်ပေ, 45 ဒီဂရီထောင့်ဆီသို့ထပ်မံစမ်းသပ်နေကြသည်။
ကျနော်တို့စမ်းသပ်မှုသုံးခုကွဲပြားခြားနားသောအချက်များမှာစမ်းသပ်တဲ့စက်ဘီးခမောက်။ ကျွန်ုပ်လက်သည်ပေတစ်ခုဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်သည်။ ၎င်းကိုရှေ့တွင်ရှိသောဤစစ်ဆေးမှုတွင်စမ်းသပ်သည်။ omnidirectional ဖြစ်သည့် MIPS သည်လမ်းကြောင်းအားလုံးသို့ရွေ့လျားနိုင်သည်ကိုသေချာစေရန်။
ဒါပေမယ့်ဒီစမ်းသပ်မှုကနေတဆင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုလွတ်လပ်စွာရွေ့လျားအောင်သေချာအောင်လုပ်ထားတယ်။ ကျနော်တို့ဘက်ခြမ်းကိုခေါ်တော်မူသောဤ ဦး တည်ချက်အတွက်စမ်းသပ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ MIPS ဦး နှောက်ကာကွယ်ရေးစနစ်ဟာအဲဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းရွေ့လျားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်နေပါတယ်။
ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့အဲဒါကိုလက်တွေ့ဘ ၀ မှာတွေ့နိုင်တဲ့ Oblique impact လို့ခေါ်တဲ့စမ်းသပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအချက်မှာသံခမောက်အပေါ်သက်ရောက်မှု။ စက်ဘီးမတော်တဆမှုတွေအများဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာငါပြောမယ်၊ အိုကေ၊ မင်းရဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုခေါင်းကိုငါရွေးနိုင်မလား။ တစ်မိနစ်အကြာကဒီအရာတစ်တန်အလေးချိန်။
ကြည့်ရသည်မှာအရွယ်အစား၊ အရွယ်အစား၊ ၅၈ စင်တီမီတာဖြစ်သည်။ ဤသူကားငါ၏ကိုယ်ပိုင်အမှန်တကယ် ဦး ခေါင်းအရွယ်အစားဖြစ်ပါသည်။ ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော့်လည်ပင်းဘယ်လောက်ခိုင်မာတယ်ဆိုတာကိုမယုံနိုင်ဘူး။
မလွယ်ကူလို့လား။ - ဒါက ၄၂ ကီလိုဂရမ်ပါ။ - မှန်ကန်သော။ - ကျွန်ုပ်တို့တွင်မတူညီသောခမောက်များအတွက်မတူညီသောစစ်ဆေးမှုခေါင်းများရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာအလယ်အလတ်တန်းစားအရွယ်အစားရှိပြီးကလေးအရွယ်အစား၊ ကြီးမားတဲ့အရွယ်အစားတစ်ခုရှိတယ်။ အားလုံးသည်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်အတွက် Accelerometer စနစ်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဒါပေမယ့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုမစတင်မီသံခမောက်လုံးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ချထားဖို့လိုသော Gyro တစ်ခုလည်းရှိသည်။ အိုကေ၊ သင့်ကိုငါပြမည်။ အိုကေ၊ သင်ကသံခမောက်အတွင်းထည့်နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ငါတို့စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာမင်းတို့ထုံးစံအတိုင်းခင်ဗျားမေးစေ့ခါးပတ်ကိုသက်တောင့်သက်သာထားဖို့ခင်ဗျားခမောက်ကိုသုံးလေ့ရှိတယ်။ မလိုချင် - ငါအရမ်းအဆင်ပြေငါ့ဥစ္စာရှိသည်။ သငျသညျသိ, တစ်နေရာရာမှာအဲဒီမှာန်းကျင် flutinging ။ - နှာခေါင်းသည်သံခမောက်အစွန်းကိုပုံမှန်ဖြစ်စေရန်အတွက်၎င်းကိုနေရာချပါ။
သံခမောက်၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီစနစ်တကျ ဦး တည်ထားရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဤကိရိယာအနည်းငယ်ရှိသည်။ သံခမောက်တိုင်းတွင်ထိုအကွာအဝေးကိုသတ်မှတ်ထားသည်။ အဲဒါပြီးပြီဆိုရင်၊ system ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားပြီးစမ်းသပ်ခုံပေါ်တွင်တင်ပါ။
ထိုအခါစမ်းသပ်မှုခုံတန်းရှည်ငါ့အစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုကနေသိလိမ့်မယ်အဘယျသို့အမြင့်, သက်ရောက်မှု၏အဘယ်အရာကိုအချက်နှင့်အရာအားလုံး။ ကိရိယာတန်ဆာပလာသည်ဤအပလီကေးရှင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည် ဦး ခေါင်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်အမှန်တကယ်တည်ရှိသည်ကိုဖော်ပြသည်။ ဒါကြောင့်စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာမူလသံခမောက်နဲ့သံခမောက်ရဲ့ MIPS ဗားရှင်းကိုစမ်းသပ်တဲ့အခါတူညီတဲ့ setup ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ငါဖတ်ပြီးတာနဲ့ငါလိုချင်သောနံပါတ်များ, သက်ရောက်မှုအကြိုကျဆုံးခြင်းကာလအတွင်း ဦး ခေါင်းနှင့်သံခမောက်လုံးကိုကိုင်ထားသည့်လီဗာကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ လီဗာလွှတ်သည်ပေ ၅၀ စင်တီမီတာသာရှိသည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်သွားနိုင်သည်။
ကွန်ပျူတာကိုပိတ်ပါ။ ၎င်းကိုကောက်ယူရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်ထပ်မံဖြုတ်ပါ။ (ပြင်းထန်သောအီလက်ထရောနစ်တေးဂီတ) - ဟုတ်တယ်၊ စမ်းသပ်မှုကအဲဒီမှာပြီးပြီးပြီ။ ရလဒ်တွေကဒီမှာလား။ - ဟုတ်တယ်။
ဒါကြောင့်စမ်းသပ်ဒေတာအားလုံးဟာကေဘယ်ကိုဖြတ်ပြီးကွန်ပြူတာဆီချဲ့ပြီးဒီပရိုဂရမ်ကိုချဲ့တယ်။ အခြေခံအားဖြင့်ဒီမှာအရှိန်မြှင့်တာကိုတွေ့ရမယ်။ ဆောင်းပါးမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း၊ ရွေ့လျားမှုနှေးကွေးမှုကသက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်။
ဒါကနှေးကွေးတဲ့အတွက်တစ်စက္ကန့်ကို frame ၁၀၀၀ ဖြစ်တယ်။ သငျသညျမြန်ဆန်စွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံအားဖြင့်ရုပ်ပုံယူနိုင်ဘူး။ ဗားရှင်းနှစ်မျိုးလုံးကိုဘေးချင်းယှဉ်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ အားလုံးကောင်းပြီdအိုကေ။ ဒီဇယားကွက်များမှာအဝါရောင်နှင့်အဖြူရောင်လိုင်းများ၊ x, y, z, parameters များကိုတွေ့နိုင်သည်။
အဲဒီမျဉ်းကြောင်းတွေကြားမှာအချိန် ၅ မီလီစက္ကန့်ကအချိန် - ၁၀၀ မီလီစက္ကန့်လောက်ကြာတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ - အတိအကျ - ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင်အခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုသင်မသိမီအကျိုးသက်ရောက်မှုများကုန်ဆုံးသွားလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ အခြေခံအားဖြင့်သင့်အသက်ကိုကယ်တင်ရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဤသက်ရောက်မှုသည် ၈ မိနစ်စက္ကန့်အတွင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါသည်လည်းသင်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုပြသနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ angular အရှိန်နှင့် angular အလျင်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျရှိတူညီသောအစိတ်အပိုင်းများ, အစိမ်း, အဖြူနှင့်အဝါရောင်။ အဆိုပါ angular အလျင် strain နှင့် ဦး နှောက်တစ်သျှူးများ၏မျက်ရည်များသောအားဖြင့်အများအားဖြင့်ဆက်နွယ်နေပါသည် - နှင့်ဒါက irradiating များအတွက် MIPS စနစ်ကသည်မဟုတ်လော ဒီတော့ဒီနံပါတ်က MIPS နဲ့ Non-MIPS helmets တွေကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါငါတို့ကြည့်တဲ့မီးမောင်းထိုးပြလိမ့်မယ်။
တဖန် MIPS helmets ကိုရမှတ်နိမ့်နိူင်သည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ အိုကေ၊ လွန်ခဲ့သောတစ်မိနစ်ကဤကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုများစွာအပြီးတွင်၊ MIPS မဟုတ်သောသံခမောက်သည်မတူကွဲပြားနေသည်ဟုသင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်သင်အမှန်တကယ်ကွဲပြားခြားနားသောသံခမောက်လုံးကိုဖမ်းရန်ရှိသည်။ ဒါကလေထဲကိုအများကြီးတက်လာတယ်။
စွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူသောကြောင့်၎င်းသည်ဖမ်းမိသောငါးကောင်သေးတော့မဟုတ်ပါ။ စွမ်းအင်သည်သံခမောက်လုံးထဲ၌ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအခြားနေရာများတွင်လည်းပစ်ခတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ဆိုလိုတာကငါတို့အခြေခံအားဖြင့်မင်းတို့ကမင်းတို့စွမ်းအင်၊ စလစ်လေယာဉ်၊ MIPS ဆီကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်တာနဲ့မင်းကစွမ်းအင်ကိုရတယ်၊ ခုန်လို့မရဘူး၊ ရလိမ့်မယ်၊ ဒါဆိုမင်းကမင်းခေါင်းထဲမှာခံစားမိမှာမဟုတ်ဘူး။ မင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဒီမတော်တဆမှုဟာဒီထက်ပိုဆိုးရွားတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့မြင်ဖူးမှာပါ။
စွမ်းအင်ကိုသင်၏စနစ်ကစုပ်ယူသည် - ဟုတ်တယ်, အတိအကျ။ (ပျော့ပျောင်းသောအီလက်ထရောနစ်ဂီတ) - လှည့်သောလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့် ဦး နှောက်ဒဏ်ရာရခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းနှင့်ပညာရေးအလုံအလောက်ရှိပါသလား။ - အရေးအကြီးဆုံးကတော့လူတွေကသံခမောက်ကိုဝတ်ကြတယ်။ ဆိုလိုတာကအဲဒါဟာအရေးအကြီးဆုံးပဲ။
စက်ဘီးစီးတဲ့အခါမှာမင်းမှာသံခမောက်ရှိတယ်။ သငျသညျအလုပ်မလုပ်ဖို့ drive ကိုသို့မဟုတ်တိုတောင်းသောအကွာအဝေးကွာလျှင်ပင်။ ဒီတိုတောင်းသောမတော်တဆမှုအများစုသို့မဟုတ်များစွာသောသင်စတိုးဆိုင်ကိုသွားနှင့်သမျှကိုဝယ်ကြောင်းတွေ့ရှိနိုင်သည်။
သံခမောက်လုံးကိုတင်ပါ။ နေ့တိုင်းသံခမောက်လုံးဝတ်တယ်။ ကားထဲမှာထိုင်ခုံခါးပတ်ကိုဝတ်လိုက်တာနဲ့တူတယ်။
ငါ့အဘို့ဒါဟာသင်တန်းကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပရှိအခြားနိုင်ငံများတွင်မူသံခမောက်ကိုဆွီဒင်တွင်သုံးလေ့မရှိသကဲ့သို့ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်လူ့ ဦး ခေါင်းနှင့် ဦး နှောက်သည်မည်မျှအထိခိုက်မခံကြောင်းသင်နားလည်ပါကသင် ဦး ထုပ်နှင့်တတ်နိုင်သမျှလုံခြုံစိတ်ချရသော ဦး ထုပ်တစ်ခုလိုချင်သည်။
ဒီနေ့စင်ကြယ်သောဒေါင်လိုက်သက်ရောက်မှုများအတွက်စမ်းသပ်ပြီး, သင်သည်မကျလိမ့်မည်။ သင်တစ် ဦး ထောင့်မှာလဲကြ။ ပြီးတော့လည်ပတ်မှုရနိုင်တယ်။
ပြီးတော့ ဦး နှောက်ဟာအလှည့်ကျလှုပ်ရှားမှုအတွက်ပိုပြီးအကင်းပါးတယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်။ ဒါကြောင့်နောက် ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်းခမောက်တွေပိုကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ သံခမောက်လုံးအများစုတွင် anti-rotation system ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ (Cheeky အီလက်ထရောနစ်ဂီတ) - ကျွန်ုပ်အတွက်ကိုယ်ပိုင်သံခမောက်တစ်ခုကိုရွေးချယ်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အရာဝတ္ထုနှစ်ခုကိုအားကိုးမိသည်။
ငါကဝတ်ဆင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုကြည့်ရှုမလဲ ဘယ်လောက်အဆင်ပြေပါသလဲ အဲဒါပေါ့ပါးလား? လေဝင်လေထွက်ကောင်းသလား၊ ငါ့ ဦး ခေါင်းကိုတကယ်ကာကွယ်မပေးဆိုတာကိုငါဘယ်တော့မှမစဉ်းစားခဲ့ဘူးလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာအရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့သံခမောက်ကိုအဲဒီလိုလုပ်မယ်လို့အမြဲတမ်းယူဆခဲ့တယ်။ ထိုအခါငါကျိန်းသေတစ်စက္ကန့်အဘို့အလှည့်လှုပ်ရှားမှုများစဉ်းစားကြပြီမဟုတ်။ ငါတစ်ခါမှမကြားဖူးတဲ့အရာက ဦး နှောက်ပဲ။
ထို့အပြင်ခမောက်အများစုကိုဤကဲ့သို့သောဒေါင်လိုက်ကျသောစစ်ဆေးမှုဖြင့်စမ်းသပ်သည်။ သငျသညျဆီးနှင်းကမ္ဘာလုံးသို့ကြည့်ပါလျှင်, သင်ဆီးနှင်းမရွေ့ကြောင်းကိုတွေ့လိမ့်မည်။ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊ ဤအရာသည်သင်၏ ဦး နှောက်ဖြစ်ပြီးယခုကျွန်ုပ်တို့ angular velocity ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ကြိုးစားနေသည်။ ငါတို့စက်ဘီးပေါ်မှာတွေ့ကြုံခံစားအဖြစ်။
ပြီးတော့အဲဒီလိုမတော်တဆမှု (သို့) မတော်တဆမှုရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသင်စတင်မြင်တွေ့ရပြီ။ ဒါကြောင့် MIPS system ကိုတီထွင်ခဲ့တာပါ။ ဦး နှောက်ဒဏ်ရာကိုကာကွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
သင်တစ်စုံတစ်ခုကိုသင်ယူပြီးပြီဆိုရင်၊ ဒီဆောင်းပါးကိုဒီနေ့ခေတ်လက်မထောင်ပါနဲ့။ နောက်ထပ်ဆောင်းပါးတွေအတွက်တော့အောက်ကကိုနှိပ်ပါ။
MIPS ခမောက်အားလုံးအဘို့အပိုလုံခြုံတဲ့ဒီဂရီပေးဆိုင်ကယ်မြင်းစီးသူရဲ။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အဟောင်းကိုအစားထိုးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါကသံခမောက်, အပို $ 20 သို့မဟုတ်ဒီတော့ non- ထံမှအဆင့်မြှင့်တင်ရန်MIPSရန်MIPS- တပ်ဆင်ထားတဲ့မော်ဒယ်ကောင်းတယ်။တန်ဖိုးရှိစျေးနှုန်း။ အခုအချိန်မှာ,MIPSနည်းပညာကို select လုပ်ပါရရှိနိုင်ပါသည်ခမောက်Giro, Bell, POC, Scott နှင့် Lazer မှဖြစ်သည်။ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ၂၀၁၅
ငါတို့သိသမျှအားလုံးသည်MIPSတပ်ဆင်ထားသံခမောက်အနည်းဆုံး ၁၀%ပိုကောင်းnon- ထက်လည်ပတ်သက်ရောက်မှုကိုင်တွယ်မှာMIPSကဗျာ။ ဒါပါပဲMIPSပြောလိမ့်မယ် တချို့ခမောက်မူလကပင်ဖြစ်ကြသည်ပိုကောင်းအခြားသူများထက်လည်ပတ်သက်ရောက်မှုများပျောက်ကွယ်သွားမှာMIPSကရင်။
လေးခမောက်စမ်းသပ်ခံရသည့် ၃၀ အနက် ၅ ကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ခံရသည်။MIPSအလွှာ - ဘက်စုံသက်ရောက်မှုများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလှည့်စွမ်းအား၏ရလဒ်အဖြစ် ဦး နှောက်ဒဏ်ရာကနေကာကွယ်ပေးဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သည့်စနစ်။ဇွန် ၂၈ အောက်တိုဘာ 2018
နှင့် ဦး ထုပ်ထဲမှာတစ် ဦး က ဦး ခေါင်းMIPSမပါဘဲ ဦး ထုပ်အတွက် ဦး ခေါင်းထက်လျော့နည်းလှည့်ပါလိမ့်မယ်MIPS။ ဒါကြောင့်ငါတို့ပဲလိုအပ်တယ်ကMIPSဦး ခေါင်းလည်ပတ်မှုကိုလျှော့ချရန်အလွှာအလွှာတွင်ပွတ်တိုက်မှုနိမ့်သည့်ကိန်းရှိရန်။ '၁ ဇူလိုင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
Bontrager Rally MIPS သည်အမြင့်ဆုံးရရှိသူဖြစ်သည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအားလုံးအကြားခမောက်ဒါက Rally ကိုအကောင်းဆုံးတောင်ဖြစ်ရုံတင်မက ၂၀၂၀ မှာစမ်းသပ်ခဲ့တာပါစက်ဘီး ဦး ထုပ်စမ်းသပ်မှုအတွက်ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးများအတွက်ကျော်ဆုရှင်သံခမောက်မင်းခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားနိုင်တယ်
MIPS ထည့်ခြင်းအသစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်လက်ရှိရန်သံခမောက်အကွာအဝေးဟာပူဇော်သက္ကာဆီသို့ ဦး တည်ကြီးစွာသောခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်သံခမောက်အသုံးပြုသူများအလှည့်ရွေ့လျားမှုဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကဆက်ပြောသည်။
Theမကောင်းဘူးဖြေ။ ။ စွမ်းဆောင်ရည်ကန့်သတ်ချက်က (၄၅) မှတ်အထိတက်လာတယ်။ ဤသည်မက်လုံးကိုလက်ခံရရှိရန်ကပိုမိုစိန်ခေါ်မှုစေသည်။ အဆိုပါထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ရည်တံခါးခုံကို 85 မှတ်မှမြင့်တက်နေသည်။ အဆိုပါအရုပ်ဆိုး: နှစ်ပေါင်းများစွာပံ့ပိုးပေးသူနှစ်ပေါင်းများစွာအစီရင်ခံသောအရည်အသွေးအစီအမံများကို ၂၀၂၀ တွင်ဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်းများပြုလုပ်သည်။၂ နို ၀ ဒီဇင်ဘာ 2019
WaveCel သည် MIPS ထက်ပိုကောင်းသလား။
Olandon, Portland ရှိ Legacy Research Institute မှလေ့လာမှုတစ်ခုအရWaveCelသိသိသာသာပိုပြီးထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်MIPS ထက်ဦး နှောက်အပေါ် linear သက်ရောက်မှုတပ်ဖွဲ့များနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားတပ်ဖွဲ့များနှစ် ဦး စလုံးလျှော့ချအတွက်။ Smith ကအသုံးပြုသော Koroyd နှင့်ဆင်တူသော်လည်း Koroyd တပ်ဆင်ထားသောခမောက်များသည် aMIPSအလွှာ။
လေယာဉ်ပျက်ကျတဲ့အခါမင်းရဲ့ ဦး ခေါင်းကအေးမြ၊ သက်တောင့်သက်သာနဲ့လုံခြုံမှုရှိအောင်သေချာဖို့သံခမောက်လုံးကိုငွေသုံးစရာမလိုပါဘူး။ တကယ်တော့အလေးချိန်ပင်နယ်တီရှိနေသော်လည်းဘတ်ဂျက်စက်ဘီးစီးခြင်းခမောက်ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့နိုင်ပါတယ်အန္တရာယ်ကင်းထွက်ပိုကောင်းတဲ့ပရီမီယံ options များအချို့ထက်ပိုကောင်းရှာဖွေနေ။16ပြီ ၁၆ 2021
Theသံခမောက်သင့်ရဲ့ ဦး ခေါင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသုတ်ကြိုးတင်းကျပ်မီပင်အတွင်းပိုင်းပျော့မြှုပ် pads ကိုချုံ့နှင့်အတူ snugly ပေမယ့်မသက်မသာ fit သင့်ပါတယ်။ရွေးချယ်ပါမသက်မသာတင်းကျပ်စွာဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲတတ်နိုင်သမျှနီးကပ်စွာကိုက်ညီသောအရွယ်အစား။ ထို့နောက်သင့်လျော်သောညှိညှိရန်ဆိုဒ်အရွယ်အစားပြားကိုသုံးပါ။ဇွန် ၉ 2021
ဝယ်ရန်အကောင်းဆုံး MIPS ခမောက်ကဘာလဲ။
စက်ဘီးစီးရန်အတွက်အကောင်းဆုံး MIPS ဆိုင်ကယ်ခမောက် ၁၁ ခု။ 1 1. Giro ကရိယာ MIPS သံခမောက်လုံး။ $ 64.95 ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောဆိုင်ကယ်သမား Pros:22. Bontrager Spectre WaveCel စက်ဘီးစီး ဦး ထုပ်။ ၃။ S-Works လွှမ်းမိုးထားသည့် II + ANGI MIPS သံခမောက်လုံး။44. ဘဲလ်စူပါ 3R MIPS အရွယ်ရောက်ပြီးသူတောင်ကြီးတောင်ငယ် ဦး ထုပ်။ ၅။ Troy Lee ကဒီဇိုင်း A2 MIPS သံခမောက်လုံး။ နောက်ထပ်ပစ္စည်းများ
တောင်တက်စက်ဘီးစီးရန် MIPS သံခမောက်လုံးလိုပါသလား။
သင်၏စက်ဘီးပေါ်၌ရှိနေစဉ် MIPS စက်ဘီးစီးခြင်းဖြင့်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုအနည်းငယ်အကာအကွယ်ပေးပါ။ သငျသညျအများအားဖြင့်, လမ်းပေါ်မှာစီးပဲဖြစ်ဖြစ်, သင်၏လျှပ်စစ်တောင်ပေါ်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင်လမ်းကြောင်းနှိပ်သို့မဟုတ်နှစ် ဦး စလုံးရောနှောပျော်မွေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်, မြင်းစီးသူရဲများနှင့်ဘတ်ဂျက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုများအတွက် MIPS သံခမောက်လုံးရှိပါတယ်။ 1. Giro ကရိယာ MIPS သံခမောက်လုံး
MIPS နှင့် wavecel ခမောက်တို့၏ခြားနားချက်ကဘာလဲ။
Bontrager Spectre WaveCel စက်ဘီးစီးခြင်းသံခမောက်လုံးသည်ဆန်းသစ်သော WaveCel နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အချို့သောထောင့်ချိုးသက်ရောက်မှုများအတွင်း ဦး နှောက်ကိုကာကွယ်ရန်ကူညီသည်။ MIPS နှင့် WaveCel သည်အချို့သောသက်ရောက်မှုများအတွင်း ဦး နှောက်ကိုကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်သော်လည်းဆန်းသစ်သောနည်းပညာများအကြားအဓိကကွဲပြားခြားနားမှုအချို့ရှိသည်။